झापा । असोज पहिलो सातायता झापामा डेंगु संक्रमण फैलिँदै गएको छ । अहिलेसम्म ४ सय ४१ जनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ । योसँगै जिल्लामा त्रास फैलिएको छ । डेंगुको संक्रमणका कारण अर्जुनधारा ११ की ३६ वर्षीया सुनीता अधिकारी बरालको मंगलबार मृत्यु भएको छ । बरालको नोबेल अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछ...
कार्तिक ६, 2074 चितवन । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम जिल्लामा निकै प्रभावकारी देखिएको छ । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति चितवनकी प्रबन्धक सिर्जना पौडेलका अनुसार हालसम्म ११ हजार २५० परिवारका ५१ हजार ...
परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा महिला अ...
कार्तिक ५, 2074 इनरुवा । सुनसरीमा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगमा महिला अगाडि रहेको पाइएको छ । सुनसरीमा अस्थायीदेखि स्थायी परिवार नियोजनका साधन प्रयोगमा महिलाभन्दा पुरुष लजालु हुने गरेकाले महिला परिवार नियोजनमा अगाडि देखिएको जिल्ला स्वास्थ...
तिहारको समय छ मिठाई खाँदै हुनुहुन्छ ?...
कार्तिक ३, 2074 काठमाडौं । तिहारको बेलामा मिठाइको प्रयोग बढि मात्रामा हुने गरेको छ । विषेश गरेर तिहारमा मिठाई र माछा मासु तथा प्रोटिनका मात्रा बढि भएका खाने कुराको बढि प्रयोग हुन्छ । मिठाईलाई स्वास्थ्य, व्यायाम अनुसार ठिक्क खाए स्वास्थ्य ...
मस्तिष्कको क्षमता बढाउने यी हुन अनारक...
कार्तिक ३, 2074 काठमाडौं । अनार एउटा यस्तो फल हो जो महँगो पनि छ र उपयोगी पनि छ । अनार खान पनि समस्या हुन्छ । यसलाई छोडाएर खान धेरै हैरानी हुन्छ । एक अनुसन्धानका अनुसार महिला र पुरुषले दिनमा एक गिलास अनारको जूस नियमित पिउने गर्दाले बीर्य अर्थात स्फार्ममा बृद्धि ह...
कार्तिक २, 2074 गौशाला । महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबास नगरपलिकामा असोजको पहिलो साता देखापरेको डेंगु रोगले महामारीको रुप लिन थालेको छ । जिल्ला अस्पताल जलेश्वरका अनुसार बर्दिबास नगरपालिकामा पाँचजनाबाट शुरु भएको डेंगु रोग अहिले फैलिएर १५५ जनाभ...
डा. केसीले तोडे १३ औं अनशन (हस्ताक्षर...
कार्तिक १, 2074 काठमाडौं । सरकारले कात्तिक ६ मा बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश जारी गरी ऐन ल्याउने भएपछि डा. गोविन्द केसीले अनशन तोडेका छन् । सरकारले माग पूरा गर्ने बचन दिएपछि डा गोविन्द केसीले अनशन तोडेका हुन् । सरकारले आफ्नो मा...
ढुक्क भएर काम गर्नुस् : स्वास्थ्यमन्त...
कार्तिक १, 2074 काठमाडौँ । नवनियुक्त स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले कर्मचारीले ढुक्कले जनतालाई सुविधा पुग्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार मन्त्रालयलाई पदबहाली गर्दै मन्त्री बोहराले राजनीतिक पूर्वाग्रह र हस्तक्षेत्रबाट मुक्त भई...
२ सय ६५ जनामा स्क्रब टाइफस, १८ जनामा ...
कार्तिक १, 2074 चितवन । चितवनमा २६५ जनामा स्क्रब टाइफस रोगको संक्रमण देखिएको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय चितवनकाअनुसार साउनदेखि अहिलेसम्म २६५ जनामा स्क्रब टाइफस र १८ जनामा डेंगु रोग देखिएको छ । तीमध्ये स्क्रब टाइफसबाट दुई जनाको मृत्य...
आयुर्वेदलाई मौलिक चिकित्साका रुपमा वि...
आश्विन ३१, 2074 काठमाडौँ । स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आयुर्वेदलाई मौलिक चिकित्साका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । आयुर्वेद विभागले राष्ट्रिय आरोग्य दिवस तथा धन्वन्तरी जयन्तीका अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले आयुर्वेदलाई प्र...
स्वास्थ्य संस्थाहरु स्थानीय तहका अधिनमा
आश्विन ३१, 2074 दाङ । जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थालाई स्थानीय तहको अधिनमा रहने गरी सुम्पिएको छ । सोमबार घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा जिल्लाका ३६ स्वास्थ्य चौकी र दुई वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको हो । ‘ती स्वा...
विपन्नको स्वास्थ्य बीमाको रकम नोबेलले...
आश्विन ३०, 2074 मोरङ । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले विपन्न परिवारका लागि स्वास्थ्य बीमा शुल्क तिर्ने भएको छ । नोबेलका सञ्चालक डा. सुनिलकुमार शर्माका अनुसार मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का सम्पूर्ण परिवारलाई ३ वर्षभित्रमा निःशुल्क स्...
१ हजारले एचआइभीविरुद्धको औषधि खाँदै
आश्विन २८, 2074 धनगढी । कैलाली जिल्लाको दुई ठाउँमा सञ्चालनमा रहेका एन्टी रेक्टोभाइरल थेरापी एआरटी सेन्टरबाट १ हजार १६६ जनाले एचआइभी एड्सविरुद्धको औषधि सेवन गरिरहेका छन् । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय र एड्स हेल्थकेयर फाउण्डेशनको संयुक्त आ...
औलोको उच्च जोखिममा रहेका कञ्चनपुरमा क...
आश्विन २८, 2074 कञ्चनपुर । औलोको उच्च जोखिममा रहेका कञ्चनपुरका ८ वटा स्थानीय तहका ३८ वडाका बासिन्दालाई ९६ हजार ७७१ कीटनाशक झुल निःशुल्क वितरण गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, ग्लोवल फण्ड र सेभ ...
← अघिल्लो 12… 61 62 63 64 65 66 67 68 69 … 73 74 पछिल्लो →